OGOLOGO oge EZIOKWU Kọmputa
DC ọgụ cores
DC ọgụ mejupụtara cores
DC ọgụ otu cores
EMC Common Mode ịkpagbu cores
High ugbu a nkịtị mode na nnyonye anya nyo isi
Nanocrystalline cores maka Ugbu transformer
Nanocrystalline cores maka leakage Circuit Oké mmali
Nanocrystalline cores maka Power transformer
Basic oke nke ribbon1K101
Basic oke nke ribbon1K107
Ngwa nke nanocrystalline isi
Nanocrystalline, makwaara dị ka nano-amorphous, bụ a ọhụrụ ụdị magnetik ihe onwunwe. Nanocrystalline cores na-mfọn ndị mmadụ elu ha magnetik permeability, elu squareness ruru, ala isi ọnwụ na elu okpomọkụ kwụsie ike. The Nanocrystalline isi nwere elu saturation ma ...
Okwu Mmalite nke amorphous ihe
site ha na 19-03-25
Amorphous alloys bụ ọla na alloys na enweghị ogologo nso iji na ha atọm ndokwa. The omenala metal ma ọ bụ alloy nwere mgbe crystal Ọdịdị, mgbe amorphous alloy etịbede mbụ mgbe nile crystal Ọdịdị na ọnọde a ogologo oge disordered Ọdịdị na ngwa cooli ...
Anyị nwere nnọọ obi ụtọ na ndị mba ọzọ ndị ahịa na-abịa ileta anyị factory na 2018.They bụ nnọọ mmasị na ngwaahịa na mmepụta usoro. Anyị na-ahịa na mmepụta ogbako ịghọta mmepụta gburugburu ebe obibi, nakwa na anyị dị na mmepụta nke akpaaka akụrụngwa. M na-atụ ihe na ...
Iron- Dabere amorphous Ribbon , kpọrọ nkụ Type transformer , Nanocrystalline Core , Nanocrystalline cores N'ihi Ugbu transformer , Fe Dabere amorphous Ribbon , Emc Core,